Momba anay - Cangzhou Ruichen Electronic Equipment Co., Ltd.
RuiChen Electronic Equipment Co., Ltd. Niorina tamin'ny 2003. Izy io dia mpamatsy iray manerantany manokana amin'ny famokarana R & D 、 sy fivarotana kabinetra fampirantiana LED. 65 tapitrisa ny vola ampiasain'ny orinasa ary mitentina 25000 metatra toradroa ny velarany. Ny orinasanay dia manana fitaovana famokarana mandroso, ekipa famolavolana sy fampandrosoana voalohany ary ny serivisy mahomby indrindra aorian'ny fivarotana. ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly, ary ny vidin'ny vokatra no ambany indrindra amin'ny indostria. Ny vokatr'ilay orinasa dia misy indrindra ny kabinetra alim-by maty, ny kabinetra vy tsy tantera-drano, ny kabinetra fanoratanao profil aluminium, ny kabinetran'ny efijery, ny kabinetran'ny takelaka hazavana, ny kabinetra miolaka, ny kabinetran'ny tsanganana ary ny vokatra hafa. Ny orinasanay dia nametraka fiaraha-miasa stratejika amin'ireo orinasa malaza maro toa an'i Qiangli, Lijing ary Ruiling.
Ruichen dia manana fotodrafitrasa famokarana mandeha ho azy iraisam-pirenena mandroso sy ekipa R&D matihanina, fitantanana fenitra famokarana, vokatra avo lenta ary ekipa varotra sy serivisy tonga lafatra. Ruichen dia miaro ny Green, carbon ambany, ny fitsitsiana angovo ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Ruichen dia nandresy ny "marika fanta-daza Hebei", nandalo ny rafitra fitantanana kalitao fampisehoana ISO9001, FCC, CE, ary mari-pankasitrahana hafa.
Ny mpanjifa dia mpampianatra anay, ary ny fiaraha-miasa amin'izy ireo dia manome antsika fotoana ianarana maro hanatsarana ny haavon'ny teknika sy ny haavon'ny fitantananay, izay hery manosika ho an'ny famokarana sy ny fampandrosoana. Ny orinasa dia manaraka ny foto-kevitry ny "manao izay rehetra azo atao mba hamokarana vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny mpanjifa sy ny takiana" ary manaraka ny filozofian'ny orinasa "ny orinasa dia mamokatra tsy ny vokatra ihany, fa ny tena zava-dehibe, ny lazany sy ny kalitaony", ary tsy mitsahatra mandray teknolojia vaovao ary manolotra fitaovana vaovao hahatonga ny tombontsoa ara-toekarenan'ilay orinasa miroborobo. Inoana fa tsy hitsahatra ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny orinasa, ary mifanaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa anatiny sy iraisam-pirenena eto amin'izao tontolo izao.